About Annie-Grace Matambu - Pindula, Local Knowledge
Revision as of 12:45, 15 September 2015 by Nirana (talk | contribs) (Replacing Related Articles with "Related Profiles")
Image Via: Miss Zimbabwe Trust
(1996-02-27) February 27, 1996 (age 25)
Current Miss World Zimbabwe 2015
Annie-Grace Mutambu is the current Miss World Zimbabwe 2015 representative who replaced Emily Tatanga Kachote after the latter was dethroned due to violating the rules and regulations due to having nude pictures.
2 Miss Zimbabwe 2015
3 Appointment to Miss World Zimbabwe
Annie-Grace Mutambu was born on 27 February 1996, in Zimbabwe. She studied at Dominican Convent High School, in Harare and is currently still a student (place of study to be advised)
At the Miss World Zimbabwe 2015 contest, Annie-Grace would come in as First Princess, behind Emily Tatanga Kachote, while pipping Chengetai Kanonhuwa who came in as Second Princess. The event was hosted at Mermaids Pool in Shamva late April 2015 by Miss Zimbabwe Trust and a total of 15 finalists participated.
Appointment to Miss World Zimbabwe
In mid June 2015, Annie-Grace replaced Emily Tatanga Kachote as Zimbabwe's representative at the Miss World pageant by virtue of Emily having being disqualified and Annie-Grace stepping in due to having been crowned the First Princess.
She is passionate about swimming, tennis, poetry and car racing.
↑ 1.0 1.1 Brenda Phiri, Miss World Zim crowned, Herald, Published: 27 Apr 2015, Retrieved: 12 Jun 2015
Retrieved from "https://www.pindula.co.zw/index.php?title=Ann-Grace_Mutambu&oldid=29448"
Contributors: Nirana, Onesimo, Pindulaadmin, Rayhatron
This page was last edited on 8 July 2018, at 07:24.